तपाईँ बचाउ गर्न, लुकाउन, र तपाईँको कागजातमा साधारण पाठमा सेक्सनहरू रूपान्तर गर्न सक्नुहुन्छ.
ढाँचा - सेक्सनहरूरोज्नुहोस् .
खण्ड सूचीमा, तपाईँले हेरफेर गर्न चाहनुभएको खण्डमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले सूचीमा भएका सबै खण्डहरू छनौट गर्न CommandCtrl+A क्लिक गर्नुहोस्, र केही खण्डहरू मात्र छनौट गर्न Shift+क्लिक(click) वा CommandCtrl+क्लिक (click)गर्नुहोस्।
एउटा स्वत:ढाँचामा समावेश हुने गुणहरू चयन गर्न, धेरै क्लिक गर्नुहोस् ।
ढाँचा - सेक्सनहरू
Title is: सम्पादन सेक्सनहरू